Holocene fauna: njirimara, mkpochapu na omume nke mmadụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge anyi bi n'ime taa bu nke amatara dika Holocene. Nke a bụ oge ikpeazụ nke mebere Oge Cenozoic ma nke ahụ malitere ihe dịka afọ 12.000 gara aga. N'oge a bụ ihe mmepe niile nke mmadụ site na omenala ndị na-agagharị agagharị ruo taa. N'ime oge a niile, ụmụ anụmanụ agbanweela nnukwu mgbanwe na ọkwa ụwa. Ya mere, anyị ga-enyocha anụmanụ nke Holocene.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite nke Holocene fauna.
1 General onodu
3 Holocene fauna na egwu nke mkpochapu
Iji kọwaa Holocene fauna anyị ga-ewebata ihe anyị hụrụ onwe anyị taa. N'ime oge a anyị enweela ike ịlele mmepe nke mmadụ, nke gụnyere ihe niile dị mkpa nke mmadụ kemgbe mmalite nke ndị otu mmekọrịta mmekọrịta na mmepeanya mbụ, mmepe ederede, njem nyocha na nnukwu ọdịbendị ọdịnala na ndị nwere ọgụgụ isi.
Kemgbe mmadụ bụ onye na-agagharị agagharị ruo taa enweela ọtụtụ mbido. Dị ka atụrụ anya mmadu bu uzo di nkpa na mmeghachi omume nke nwere Holocene. Anụmanụ ahụ agbanweela mgbanwe dị iche iche nke ụmụ mmadụ na mgbanwe ndị ha nwere iji mepụta. Ọ bụkwa na ndapụta ahụ dịka anyị si mara ya agbanweela ọtụtụ oge site na mmepe teknụzụ na ọnụọgụ mmadụ.
Oghere ndị sitere n'okike na-adịwanye ntakịrị ma mmetọ bụ akụkụ nke usoro okike a. Mụ anụmanụ na osisi aghaghị imeghari n'ọnọdụ dị iche iche n'oge dị mkpirikpi karịa ka ọ dị. Tupu ịdị adị nke mmadụ, enwere mgbanwe na ahịhịa na ahịhịa na ọkwa ụwa mana ha nwere ogologo oge. Kedu ụdị nke ụdị si wee gbanwee maka gburugburu ọhụụ ọtụtụ nde afọ pụrụ ịgafe. Kaosinadị, dị ka anyị pụrụ ịhụ taa, mmadụ agbanweela usoro a dum. Umu anumanu anumanu gha agha imeghari n’ime oge otutu otutu oge.
Holocene fauna enwetawo oke mkpochapu ebe enwere ike ịhụ usoro na-aga n'ihu. Ọbụghị naanị anụmanụ na flora na-ahụ oke mbibi zuru ụwa ọnụ nke ọrụ mmadụ kpatara. Ọtụtụ ndị ọkachamara edepụtala usoro mbibi a dị ka nke kachasị ogologo na akụkọ ntolite ụwa n'oge a anyị kwuru n'elu. Ma obu ihe kpatara nbibi a abughi mgbanwe nke ihe ndi ozo ma obu ihe mmadu mere.
Ọnọdụ nke anyị hụrụ onwe anyị na Holocene bụ oge mmekọrịta. Oge a malitere na njedebe nke oge nke mbido siri ike ma atụ anya na n'ọdịnihu adịghị anya, ice ọzọ ga-amalite.
Dịka anyị kwurula na mbụ, ụmụ anụmanụ dịgasị iche iche n'oge a mana ha kwesịrị ime mgbanwe maka ọtụtụ mgbanwe. Thedị niile ejirila jigide onwe ha oge na-agbanwebeghị mgbanwe ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ evolushọn. Speciesdị ndị ahụ etinyere ma gbatịkwuo oge bụ ndị jisiri ike lanarị mkpochapụ nke ụdị ala na nke mmiri. Omume nke mmadu na ochicho ha ichikota uwa bu ihe na etinye ndu anumanu na osisi.
Anyị ga-edepụta anụmanụ ndị ahụ dịrị na mmalite Holocene na nke adịlarị anwụ:
mammoth: ha bu umu nnoo dika enyí nke taa anyi nwere n’otu ezin’ulo. Ihe bu njiri mara ya bu inwe akpati nke ukwu ya na elu. Ejiri ntutu ntutu kpuchie ahụ ya ebe ọ bụ mmegharị iji nwee ike ịlanarị na obere okpomọkụ. Otutu mammoth ahu gbanwere ma chikotara fosil nke ufodu udim kariri enyí ugbu a. E nwere ụdị ndị ọzọ pere mpe ma kpọọ ya dwarf mammoth.
Dodo: ọ bụ ụdị nnụnụ nwere nsogbu na Mauritius. Ha pere ezigbo mpe ma dị ihe dịka kilogram 12 n’arọ. O nwere ike iru otu mita n’ịdị elu n’agbanyeghi na o nweghị ikike ife efe. Ọdịdị nke ahụ ya dị oke mma. Specialfọdụ ndị ọkachamara nke nnụnụ a kpọrọ ya dị ka ihe atụ nke mbibi nke otu ụdị site n’omume mmadụ. Ma ọ bụ na ụdị a nwere ike ibi ebe obibi ya ma zụlite nke ọma ruo mgbe mmadụ rutere n'àgwàetiti a na mmalite nke narị afọ nke XNUMX. Mgbe mmadu batara na ebe obibi ha, onu ogugu ha belata nke ukwuu rue mbibi ha.
Moa: ọ bụ ụdị nnụnụ ọzọ nke na-ata ahụhụ ma ọ bụ na New Zealand ruo narị afọ nke iri na ise. Ọ bụ ebe a ka ọ nwụrụ n'ihi mmadụ. N’ile ya anya yiri nnọọ enyí nnụnụ. O nwere ike itule ihe dị ka mita atọ na ọkara ma tụọ ihe dịka kilogram 3. Dika aturu anya, mmadu malitere ichu nta umu a maka oriri. Mwakpo nke ndị na-achụ nta Maori na ebe obibi ha bụ isi ihe kpatara mkpochapụ nke ụdị a.
Holocene fauna na egwu nke mkpochapu
Ugbu a enwere nzukọ mba ụwa nke na-ahụ maka ịtụle ụdị dị iche iche dịka ogo egwu ha na ohere ha nwere ikpochapụ. A maara nje a njikọ mba ụwa maka nchekwa nke okike (IUCN). Nje a eguzobewo uzo di iche iche site na mbelata onu ogugu ndi mmadu na ihe o na-eme na gburugburu ya. Anyị nwere ike ịchọta edemede site na enweghị ike, ihe egwu nke mkpochapu, ihe egwu dị egwu nke ikpochapu, kpochapụrụ n'ọhịa, kpochapụrụ, enweghị egwu, nke obere nchegbu na enweghị ozi zuru oke.
Ugbu a anyị ga-edepụta ụfọdụ ụdị ndị nọ n'ihe egwu nke mbibi na nke kachasị mma:
Lnx nke ndị Iberian
Anụ ọhịa Asia
Nnukwu ugo na-ezigara ndị ọrụ
Nwa browed albatross
Ọgbụgba ndụ ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ
Akpụkpọ mmiri nke agu
Ndi umu anumanu a nile nwere nke anakpo Holocene ma no na oke egwu nke ikpochapu. Nke a bụ usoro mkpochapụ ha ji nwayọ nwayọ na-ekwupụta oke mbibi nke isii. Ihe kachasị dị egwu bụ na oge a dị mkpụmkpụ maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụmụ anụmanụ na-aga ịnwụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Holocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Holocene fauna